I-Cafe "Farsh" (i-Belgorod) - indawo enhle kakhulu yenkampani yokuphumula ephelele. Isikhungo sitholakala eduze komgwaqo wasePoova, indlu ka-36. Uhlelo lomsebenzi usuku nosuku kusukela ngo-12: 00 kuya ku-02.00. Ukubhuka kokuqala kungenzeka ngefoni +7 (472) 237-14-85. Ake sicabangele ukuthi yiziphi izimo zokuphumula i-café "Farsh" (i-Belgorod) enikeza, nokuthi ihluke kanjani kwezinye izikhungo ezifanayo.
Imenyu nemigomo yesevisi
Izivakashi eziningi ezitolo zokudlela "Farsh" (Belgorod) ziphawula ukuthi lena ingenye yezindawo ezimbalwa edolobheni lapho ungakwazi ukuphumula ngokuphelele, ujabulele ukudla okuhle kanye nensizakalo enhle ngezindleko ezincane.
Imenyu e-cafe ihlukaniswe ngezigaba eziningana: eziyinhloko, ezincike, iziphuzo, ama-burgers. Isici esiyinhloko sendawo yokudlela ukuthi lapha ukuthi ungakwazi ukunambitha i-pizza nephunga elimnandi, eliphekwe ngqo esitofu ekhishini elivulekile. Izindleko zokudla azifinyeleleki futhi zamukelekile, ngakho-ke abantu abaningi bayashesha ukufika lapho.
Ingaphakathi - lokhu kuyinto ehlukile ye-cafe ethi "Farsh" (i-Belgorod). Isakhiwo esiyingqayizivele, esasetshenziselwa imicu emnyama yendwangu, izinkuni, umkhathi we-laconic - konke kuletha ukuthula, kukhululeka. Lena yindawo enhle yokuphumula kwentsha, imibhangqwana kanye nesizukulwane esikhulile.
Inzuzo eyengeziwe ukuthi kukhona photographer osebenza cafe, okudala izithombe ezimangalisayo ngesikhathi party. Bazokukhumbuza ngokuhamba kwesikhathi ukuthakazelisa okujabulisayo kule ndawo.
Lezi zinzuzo ziheha izivakashi eziningi ku-cafe ethi "Farsh" (i-Belgorod). Imenyu kule sikhungo iyakhanga kakhulu, abapheki bayakujabulela izitsha ezimnandi zokudla zaseYurophu.
Bahlala njalo, ikakhulukazi uma ulandela okunikezwayo kubanikazi beli sikhungo kumanethiwekhi omphakathi. Zakha njalo amaqembu ezithakazelisayo nezinhlelo zokuzijabulisa. Isibonelo, kusihlwa kwe-karaoke kungamenyezelwa, lowo oyinqola oyothola umklomelo othakazelisayo. Ngamaholide, ama-DJ afaka imfashini futhi adumile avame ukumenywa ukuba enze ukuthukuthela kusihlwa.
Esikhathini cafe kukhona ukukhethwa okubanzi kwamahookah, ukuze kusetshenziswe i-tobaccos engcono kakhulu kuphela. Lesi sikhungo sikhiwe njengendawo yokuzilibazisa okungabizi futhi okuphezulu, lapho ngisho nangama-ruble angu-1000 ungakwazi ukukhokhela iholide lokuqala le-VIP-holiday.
Zonke lezi zinzuzo zenza ukuthi i-cafe i-"Minced" enye yezindawo ezizithandayo zabantu abaningi. Abanikazi bokusungulwa benza konke ukwenza ukusungulwa kwesinye esidume kakhulu edolobheni.
"Embassy yaseNgilandi" (restaurant, Nizhny Novgorod): incazelo, izithombe, ukubuyekezwa
"Ibha yeBardak" (Vologda): ikheli
Indawo yokudlela e-Elarji e-Moscow
Indawo yokudlela "Esmeralda" (i-Chelyabinsk): ikheli, umqondo, ukubuyekezwa
I-Arkhangelsk: izindawo zokudlela ezifanele ukunakwa
Memo iziguli abanomfutho wegazi ophakeme: indlela yokunciphisa kontanga ngaphandle imithi
Pie ne cottage shizi no cherry: iresiphi ngesithombe